Mucaaradka Rwanda Oo Rabshado Ka Digay
Franka Habineza oo ah hoggaamiyaha mucaaradka ayaa doonaya in "Maya" loogu codeeyo afti u ogolaan karta madaxweyne Kagame inuu mar kale is-sharxo.
Hoggaamiyaha mucaaradka Rwanda ayaa weydiistay dadka dalkaas inay “Maya” ugu codeeyaan aftida khamiista iyo jimcaha laga qaadayo dalkaas, taasi oo madaxweyne Paul Kagame u ogolaan karta inuu markii saddexaad qabto xilka.
Mr. Kagame oo 58 jir ah ayaa hogaaminayey ciidamadii dhammeeyey xusuuqii Rwanda ee 1994-kii, waxaana uu xukunka ka tuuray xagjiriintii Hutu-ga. Waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Rwanda, waxaana uu madaxweynaha Rwanda noqday sanaddii 2000, markii uu madaxweynaha is-casilay.
Franka Habineza oo ah hoggaamiyaha iyo aas-aasaha xisbiga Democratic Green Party ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in qabashada xilka madaxweyne oo lagu xaddido laba goor oo kaliya ay ogolaaneyso inuu soo baxo hoggaan cusub.
Haddii aftida la ansixiyo, waxa ay sharci ahaan u ogolaan doontaa in Mr. Kagame uu xilka qabto laba xilli oo kale oo min shan sano ah.
Habineza waxa uu sheegay in haddii Kagame uu ku adkeysto inuu xukunka sii hayo in taas ay dhallin doonto rabshado la mid ah kuwa ka socda dalka deriska la ah ee Burundi.
Russia: Isbeddel Ayaa Ka Dhacaya Syria
Iskuulada Los Angeles Oo Maanta La Xiray
Islaam Naceybka Oo Ku Kordhaya Mareykanka
Shaqaalihii Gargaar Ee la dilay Yay Ahaayeen?
Wafdi Nabadeed Oo Gaaray Beledweyne